कहिले हुन्छ अब नेकपा एमाले र माअ‍ोवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता, कि अब हुँदैन एकता ? « Light Nepal
कहिले हुन्छ अब नेकपा एमाले र माअ‍ोवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता, कि अब हुँदैन एकता ?
Published On : 17 April, 2018 3:58 pm
काठमाडौं, ४ बैशाख । नेकपा एमाले र माअ‍ोवादी केन्द्रबीच हुने वैशाख ९ गतेको पार्टी एकता भत्किएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना दिवस पारेर वैशाख ९ मै पार्टी एकता गर्ने दुई पार्टीको तयारी पूरा नहुने भएको हो ।
नेताहरुले जेठ १५ को गणतन्त्र दिवस भन्दा अगावै पार्टी एकता गर्ने तयारी थालेको स्रोतका दाबी छ । त्यसका लागि दुई पार्टीका अध्यक्षलाई विवादीत विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।